Ruushka, Turkiga iyo IRAN oo ku heshiiyey dhismaha Guddiga Dastuurka ee Siiriya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Ruushka, Turkiga iyo IRAN oo ku heshiiyey dhismaha Guddiga Dastuurka ee Siiriya
September 17, 2019 - By: Abdirizak Shiino
Vladimir Putin, Tayyip Erdogan, iyo Xasaan Rouhani oo Isniintii shalay kulan sadex-geesood ah ku yeeshay caasimada Turkiga ee Ankara ayaa sheegay inay ku heshiiyeen dadar gelinta xali u helida dagaalka ka socda wadanka Siiriya.
Qodobada ugu muhiimsan ee shirkan looga hadlayey ayaa ahaa sidii loo dhisi lahaa Guddiga Dib u qorista Dastuurka Siiriya oo ay horey isugu khilaafeen sadexdan dowladooda oo kala taageera Xukuumada Siiriya ee Bashar Al Assad iyo kooxaha mucaaridka Siiriya.
Ruushka iyo Iran oo taageera Bashar Al Assad ayaa ogolaaday in guddigan qori doona Dastuurka ay ka koobnaadaan xubno ay soo xuleen dowlada Bashar Al Assad iyo xoogaga Mucaaridka ah oo iyagu taageerada ka helaya Turkiga.
Qodobkan ayaa ah mid caqabad ku noqday inay sii socdaan shirarkii ka socday magaalada Geneva ee lagu dhex dhexaadinayey Dowlada Bashar Al Assad iyo Mucaaridka, sida uu sheegay Madaxweynaha Ruushka Putin.
Madaxweynaha Iran Rouhani ayaa dhankiisa sheegay in uu rajeenayo in doorasho guud ay ka dhacdo dalka Siiriya sanadka soo socda 2020 ama 2021.
Sadexdan dowladooda ayaa shirkoodan ahaa kii shanaad oo ay ka yeeshaan xaalada dalka Siiriya, waxay sidoo kale ku heshiiyeen in la qaboojiyo dagaalada ka socday gobalka Idlib oo ah gobalka ugu danbeeyey oo ay gacanta ku hayaan xoogaga mucaaridka, gobalkaasi ayey bishii lasoo dhaafay ee Agoosto ka dhaceen dagaalo waaweyn.
Turkiga ayaa olole xoogan ugu jira in la xasiliyo gobalada Siiriya ee saaran xadka ay dalkaasi la wadaagaan si mustaqbalka dhaw ay halkaasi xeryo uga dhisto dadka qaxootiga ah ee reer Siiriya oo culeys weyn ku haya, halka dhinaca kale ay dooneyso in ay xaduudeeda ka fogeyso xoogaga Kurdida Siiriya ee taageerada ka hela Maraykanka.
Ruushka iyo Iran ayaa iyaguna doonaya in dalka Siiriya laga saaro ciidamada Maraykanka oo gacan militari siinaya xoogaga Kurdida Waqooyiga Siiriya kuwaasi oo la dagaalamaya kooxda Daacish iyo waliba ciidamada dowlada Bashar Al Assad.